UKUPHENDULA KUKAJUSTIN TIMBERLAKE KUBRITNEY SPEARS UKISSING MADONNA - IINDABA
Ukuphendula kukaJustin Timberlake kuBritney Spears uKissing Madonna
Ii-MTV VMAs zowe-2003 zabonisa enye yezo zihlandlo kuthethwe ngazo kumboniso weembasa ezidlulileyo; Okwesibini xa uBritney Spears emanga uMadonna. Eyesibini yayi-top-the-top, enyanisweni, kangangokuba abantu abaninzi abakhathali nokuba uMadonna wongeze imilebe etshixiwe noChristina Aguilera emva koko.
Ngelo xesha, phantse wonke umntu wayenemihlali ukubona ukusebenza kobomi bonke. Ukusebenza ngokutshata kwabathathu abakhenkethi abakhulu emhlabeni kwaye babenabantu abothuke ngokupheleleyo. Enye yezona zinto kuthethwa kakhulu ngazo malunga nokuphendula emva kokuncamisana emhlabeni jikelele yayileyo kaJustin Timberlake, isoka langaphambili likaBritney.
Ngelo xesha, elinye lamalungu amaninzi ekhamera yedijithali asondeza uJustin, owayethathe indawo ephantsi kunomdla kwaye engonwabanga.
UBritney noJustin basika ngo-2002 emva kobudlelwane malunga neminyaka emi-4. Izinto khange zigqibe ngokufanelekileyo kwesi sibini kwaye umphezulu wothando lwabo uhanjiswe kunye ukukopela amarhe . UJustin kuthiwa ujike waya kumculo wakhe ukuze ajongane nelahleko yothando kunye nokungcatshwa, ebhala u-Cry Me uMlambo ekudala ukholelwa ukuba utyhila esona sizathu sokwahlukana. UJustin wayeneBritney ekhangeleka ngokufanayo kwividiyo yomculo. Ngo-2003, u-Britney waphendula kunye nomculo wakhe. Ngalo lonke ixesha Ixesha elide liye laqatshelwa kubalandeli njengesixolisa esidlangalaleni kuJustin.
Nantsi into ofuna ukuyazi:
Ubuso bukaJustin Timberlake njengoko ejonge uBritney Kiss Madonna Wayengenaxabiso
UBritney noMadonna bayamangaKulungile .. Ndiyilayishe le vidiyo, kuba yenye yezona bhaso zibalaseleyo ndizibonileyo kwiMTV. Ndiyayithanda hope ndiyathemba ukuba nawe ..2009-06-09T20: 34: 30Z
UBritney noChristina bebephethe iingubo zomtshato omhlophe bakuba bevele kwinqanaba elilandelayo emva kukaMadonna, owayenxibe bonke abamnyama ngokusebenza kakuhle. Ukuncamisana okwenzekileyo kwenzeka kulo lonke uhlobo lwengoma kaMadonna, eHollywood, eyayijolise kumphezulu we-medley efundiswayo.
Wonke umntu uza eHollywood, bafuna ukuyenza ngaphakathi kobumelwane. Bathanda ivumba layo nje eHollywood, ingakonakalisa njani xa ibonakala ngathi intle kangaka? UMadonna wayecula kwimakrofoni njengoko wayenxibelelana ngobuqhetseba noBritney noChristina ngamnye. Njengoko wayecula umgca wokugqibela, waphakamisa ubuso be-Spears buye kuye kwaye i-2 yabelana nge-steamy smooch.
Ikhamera yedijithali yakhawuleza yafakwa kuJustin, ongakhange abonakalise mvakalelo ininzi nangona kunjalo wayethatha ukungonwabi. Ungayibona impendulo kaJustin kumanqaku e-3: 57 ngaphakathi kwevidiyo engentla. Emva kokumanga, uMissy Elliot weza apha ukuze abambe ukusebenza kakuhle kwe-epic.
UJustin kamva wathetha ngokufikelela kwiHollywood malunga neBritney / Madonna Kiss
UJustin Timberlake Uthetha malunga neBritney Spears kunye neMadonna2019-02-05T13: 42: 35Z
Emva kokuba ukwanga kwehlile, uJustin wancokola noPat O'Brien wase-Access Hollywood kwaye wachaza impendulo yakhe engaqhelekanga.
Xa wayecelwa ukuba athathele ingqalelo ubuninzi bokuvula, uJustin wathi yayikhazimla kakhulu.
Emva koko uPat wakhankanya ukuba uyayithanda inkangeleko yobuso bukaJustin bakuba bephuzile.
Yiza, ndoda. Ewe, eli binzana lifikile apha lisuka kwinyani yokuba iikhamera bezi, ngokufanelekileyo emva kokumanga, ziye zafana no… UJustin ukhankanyiwe, esenza intshukumo yokusondeza. Kwaye bendihlala ndithanda ukufana. Ima kancinci.
UPat uqhubeke wabuza ukuba uJustin ucinga ukuba ibinomtsalane na.
Ngawo onke amaxesha inomtsalane. Andizukuyithatha kude nabani phaya phezulu, utshilo.
Izigaba: Tech-Iindaba Hollywood Iindaba
Rick kunye nendawo yokufa ibeth
Uluann de lesseps utom d'agostino jr
Umlingisi wokuqala we-palpatine
willam tsala indoda yomdyarho
mde kangakanani ulsa prowant
uvuyo anna duggar age